Portugal: Dab xoog leh oo ka kacay bartamaha dalka oo lagu dhammaaday – Kasmo Newspaper
Portugal: Dab xoog leh oo ka kacay bartamaha dalka oo lagu dhammaaday
Updated - June 18, 2017 2:22 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Portugal, waxaa sare u sii socota tirada dadka wax ku noqonaya dab weyn oo Sabtidii ka kacay aag dhirtu ku badantahay oo ku yaalla bartamaha dalkaas, waxayna hadda maraysaa 62 qof.
Dadkaas 18 ka mid ah waxaa la sheegay in ay ku dhex gubteen gawaaridoodii oo ku xannibantay dabka, intooda badanna waddada isku xirta Figueiro dos Vinhos iyo Castanheira de Pera, mana jiro tuhun ku saabsan in dabka si ulakac ah loo bilaabay.
Ra’iisal Wasaaraha Portugal Antonio Costa oo isaga iyo Madaxweynuhu xalay gaareen dhulka Pedrogao Grande ee ugu daran ayaa ka hadlay waxa uu ugu yeeray “masiibadii ugu xumayd oo nooceeda ah oo waayadaan dhacda”.
Heerkulka sare iyo dabaylo xoog leh ayaa la sheegay in ay sii kordhiyeen fiditaanka dabkaas oo ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 59 qof oo dabdamis badani ku jiraan, kuwaas oo 600 oo ka mid ah iyo in ka badan 100 gaari ku hawlanyihiin.
Saacadihii u dambeeyayna waxaa la sheegay in ay ku soo biireen gurmad iyo qalabka dabdamiska oo ka socda dalalka dariska ee Spain iyo Fransa, Xukuumadduna waxay ku dhawaaqday 3 maalmood oo tacsi qaran ah.
Dhanka kale, Madaxweynaha Guddiga Midowga Yurub, Jean calaude-Juncker ayaa isaguna ku dhawaaqay in Hannankii Yurub ee Badbaadada Rayidka la hawlgaliyay, si loo caawiyo Portugal.